Artist na-emepụta ma na-ere Chucky ejiri aka na Billy Mogwai Dolls
Mbido Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ Artist na-emepụta ma na-ere Chucky ejiri aka na Billy Mogwai Dolls
by Trey Hilburn III November 11, 2020
by Trey Hilburn III November 11, 2020 19,719 echiche
O bughi ubochi nile na Mogwai zuru obi gi. Mana, taa bụ otu n’ime ụbọchị ndị ahụ. Otu Etsy omenka mere ụfọdụ ịtụnanya cross-gafere eluigwe na ala ọrụ na Egwuregwu Ụmụaka, hụrụ na Gremlins nke ahụ emewo ka anyị nọrọ ná mgbagwoju anya. Okwu anyi ugbua bu ichoputa ndi nke dudes ndi anyi kwesiri inwe.
Etsy artist, Oili Varpy na -emepụta ọmarịcha ụmụ bebi Mogwai a na-ejikarị arụ ọrụ na-arụkọ ọrụ ọnụ na ọbụlagodi ahaziri. Ọ bụrụ n'ịlele anya n'ọrụ ya, na mgbakwunye na atụmatụ Billy Puppet na Chucky ọ nwere ọtụtụ ndị ọzọ.
Offọdụ n'ime ha na-adọrọ mmasị ma were ụdị Gremlin n'ụdị Mogwai. O nwekwara ezigbo mma nke Baby Yoda tinyere Mogwai. O nwedịrị onye na-enye anyị nsogbu Ezigbo anụ mmiri vibes.
A na-eme nke ọ bụla iji nye iwu na nke ọ bụla ga-ewe izu 10 ma ọ dịkarịa ala iji ụgbọ mmiri pụọ. Oge ngwụcha na nke ahụ adịghị njọ ma ọ bụrụ na ị lelee njimara dị egwu ị ga-enweta.
Ndị a niile dị ịtụnanya. Nlebara anya na nke ọ bụla n'ime ihe ndị a dị ịrịba ama. Tụkwasị na nke ahụ, echeghị m na e nwere ọdịiche dị iche iche nke Billy Puppet nke nwere ike ịbụ mmiri a na-abaghị uru.
Kedu ihe I chere gbasara Oili Varpy si ihe ndị Mogwai kere? Mee ka anyi mara na ngalaba a. Oh, ma ọ bụrụ na i soro ya zụọ ahịa gwa ya iHorror zitere ya! Iji lelee ụlọ ahịa zuru ezu ISI GA-EBE A.
Lelee Friday a dị egwu nke iri na atọ ị nwere ike ịzụta na Etsy.
Chọọ Cateories Họrọ Atiya 4K UHD (4) Amazon (nkiri) (7) Amazon (usoro) (12) AppleTV + (6) Rgbọ mmiri Blu (18) Egwuregwu egwu (49) Na-akpa ọchị (14) Ihe dị jụụ ịzụta (21) Ndị mara mma ị ga -eme (5) Akụkọ Ntụrụndụ (3) Facebook (usoro) (1) Akụkọ ifo (45) Ihe osise (27) Gore (24) Ebe obibi (3) HBO (ihe nkiri) (6) HBO (usoro) (7) Akwụkwọ ụjọ (63) Akụkọ Ntụrụndụ Na-adịghị Egwu (10,930) Ihe nkiri egwu (425) Usoro ụjọ (126) Horror Subgenres (10) Hulu (usoro) (6) Ajụjụ ọnụ (nkiri) (42) Ajụjụ ọnụ (usoro) (5) LGBTQ ụjọ (42) Ndepụta (ihe nkiri) (40) Nsuso (usoro) (2) Ahịa (21) Nnukwu anụ mmiri (9) Ihe nkiri ihe nkiri (2) Nyocha Nyocha (63) Ihe nkiri (15) Egwu (38) Netflix (nkiri) (32) Netflix (usoro) (46) Na-abụghị akụkọ ifo (5) Paranormal (76) Ọrịa na-atụ ụjọ (thrillers) (53) Usoro (1) Usoro nyocha (9) Shudder (nkiri) (55) Shudder (usoro) (19) Ebube (4) Iche na nke a na-adịghị ahụkebe (39) Ihe nkiri na-asọ asọ (106) Usoro gụgharia (45) Mụaka (4) Trailer (Egwuregwu) (1) Ihe nkiri (nkiri) (281) Trailer (usoro) (49) Egwuregwu egwu egwu (1) Ezi Mpụ (49) Usoro ihe onyonyo (4) Egwuregwu vidio (190) YouTube (nkiri) (3) YouTube (usoro) (13)
'Ihe nro na -abaghị uru tupu ekeresimesi' Osisi bụ ihe ọ bụ ...
Nwanne nwanyị Haim na -ajụ ndị na -ese fim site na Twitter maka…
Mkpokọta ihe egwu Vans X na -eweta 'Ọ', 'The Shining' ...